Farriin Dhalashada - Samee Photo shakhsiga Farriin Dhalashada
> Resource > Talooyin > Sida loo sameeyo Dhalashada Farriin shakhsiga Baby Photo ah
Marka ilmahaaga cusub yimaado, ha aad rabto in aad la wadaagto warka weyn oo dunida oo dhan? Laakiin sida aad u kala qeybsan doonaan warkan wanaagsan? Sida caadiga ah, dadka soo diro qaar ka mid ah dhawaaqay ilmuhu dhasho. Dadka qaar waxay soo iibsadaan qaar ka mid ah kaararka dhawaaqay ilmuhu dhasho. Waxa kale oo aad samayn kartaa in. Si kastaba ha ahaatee, ma aad rabto in aad ku dhawaaqay ilmahaaga dhalashada ka badan shakhsiga iyo qof kasta ha ogaado in duceeyey imaanshaha ilmaha aad?
Si aad u dhawaaqay ilmo dhasho shakhsi, waxaad ku dhejin kartaa sawir ilmahaaga dhawaaqay dhalashada. Oo la wareegtay sawirka aad ilmaha yar oo qoyska iyo saaxiibada wadaagaan. Waxa kale oo aad samayn kartaa kaararka dhawaaqay elekterikal ilmuhu dhasho iyo kuwa email qoyska iyo saaxiibada.
Waxaad isticmaali kartaa Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe in la sameeyo kaararka dhawaaqay dhalashada sawirka ilmaha kartoo iyo elekterikal. Bilow ka foom oo lacag la'aan ah dhisay-in, waxaad samayn kartaa kaadhka sawir ah il-qabad ilmuhu dhasho ee qasabno! Waa maxay dheeraad ah, qalabka tafatirka badan oo xubno ka ah sida qoraalka, cliparts, filtarrada, waji, sawir doodle, iwm waxaa la siiyaa in ay kordhiso hal-abuurka.
Hel software iyo bilaabaan in ay abuuri karto dhawaaqay ilmuhu dhasho u gaar ah.
Ka dib markii ay soo degsado, rakibi oo ay maamulaan Photo Collage Studio. Dooro "Samee ka Template" si ay u bilaabaan abuuro dhawaaqay dhalashada. Haddii aad samaynayso dhawaaqay dhalashada ilmahaaga wiil ama dhawaaqay dhalashada gabar, kaliya lifaaq sawirka ilmaha iyo in loo isticmaalaa haboon wordings ilmuhu dhasho .
1 Dooro dhawaaqay template ilmuhu dhasho
Daaqadda Template ah, doortaan "Salaan Card" bidixda iyo dhirtuba ay marto kaarka sawirka on xaq. Raadi mid aad iyo double guji ama ku dhacay "OK" si aad u dalbato.
2 aad dar sawirka ilmaha iyo sawirka xaalkaa
Jiid & dhibic sawir inay jir template ama double guji jir ah in ay sawirka ku darto. Markaas tagaan "Edit Photo" tab in xaalkaa photos ilmaha, sida codsanaya qaar saamayn maaskaro, beddelo jir sawir, iwm
Ku dar qoraalka si aad u dhawaaqay dhalashada ilmaha
Guji "qurxin collage" in lagu daro qaar ka mid ah ereyo dhawaaqay dhalashada ilmahaaga . Waxa kale oo aad ku dari kartaa fanka clip qaar ka mid ah, stamps iyo xitaa doodle in aad ku darto oo xiiso leh iyo dareen dheeraad ah oo la xiriira warqadda.
3 Save the card ama u daabaco si toos ah
Hadda aad heysato kaarka dhawaaqay ilmuhu dhasho sida tan.
Waxaad u badbaadin karaa sida image ama sida wallpaper in tab ee "Save collage" iyo ka dibna aad u soo diri kartaa email si ay ula wadaagaan qoyskaaga iyo saaxiibadaa.
Haddii aad qabto printer ah ku lifaaqan, waxaad si toos ah daabacan kartaa dhawaaqay dhalashada ka soo tayada sawirka sare.
Dhalashada haya- Farriin wiilasha iyo gabdhaha
Beach sawrirrada Layouts iyo Fikradaha Page
Tallaabooyinka fudud u soo dirto fariin qoraal via E-mail, ama bilcaksii
Wedding Martiqaad haya- - Wordings u Cards Martiqaad Wedding
Engagement Fikradaha Farriin Ogeysiisyada dhaqanka iyo Green
Sida loo sameeyo Flash Banner aan Flash Adobe